HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ကလေးကျန်းမာရေး » ဆံပင်ပါးနေတဲ့ကိုယ့်ကလေး ဆံပင်ထူလာအောင် ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ ။
ရေးသားသူ Dr. Thin Yadanar @ Frances ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar.
ဦးရေပြားကို နှိပ်နှယ်ပေးရင် ဆံပင်အမြစ်ကို သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းစေတာကြောင့် ဆံပင်သန်လာပါတယ်။
အုန်းဆီ၊ သံလွင်ဆီ၊ ရှားစောင်းလက်ပပ် အနှစ် ၊ ပျားရည် စတာတွေဟာ ဆံပင် သန်စွမ်းဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝကရတဲ့ ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဆံပင် အစိုဓာတ်ကို ထိန်းပေးထားနိုင်ပြီး ဆံပင်ကို ပိုပြီးနူးညံ့သန်စွမ်းအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နွေရဲ့ အပူချိန်ကို အံတုဖို့ ဒီ အသီးတွေ သင့်ကလေးကို ကျွေးသင့်ပါတယ်။ ။